Onye na-enye ndị na-azụ ụgbọ mmiri China, Dim Dimble, Transformer, Constant Current Led Driver
Nkọwa:Onye ọkwọ ụgbọala na-edozi,UL Dimmable Transformer,Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu ugbu a,Saucer Ụdị Ọkụ Diri,esi gbakwunye ndị ibe ya,
Home > Ngwaahịa > UFO Azụ Mmiri Na-ahụ Maka Oké Osimiri > Ọkwa ụgbọ mmiri dị elu Bay Light
Ngwaahịa nke Ọkwa ụgbọ mmiri dị elu Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Onye ọkwọ ụgbọala na-edozi , UL Dimmable Transformer suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu ugbu a R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
240W UFO High Bay Light Driver High PF  Kpọtụrụ ugbu a
N'èzí UFO High Bay Light Driver 100W  Kpọtụrụ ugbu a
UFO Driver 100W 277V Round High Bay Application  Kpọtụrụ ugbu a
Saucer Round High Bay UFO Driver 100W  Kpọtụrụ ugbu a
Gym & Warehouse High Bay Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Saucer Round High Bay UFO Driver 150W  Kpọtụrụ ugbu a
UFO 240W LED High Bay Lighting chofer almacen  Kpọtụrụ ugbu a
240W UFO High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
High Bay UFO LED Driver 200W  Kpọtụrụ ugbu a
FD-240U, Akara akpụrụ akpụ, tinye aka na ìhè Bay Bay . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga n'ihu Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110...
N'èzí UFO High Bay Light Driver 100W
Nkọwapụta ngwaahịa Ike ike Max MaxW Ebube ugbu a na 1 ọnọdụ dimkpa: 0-10V, PWM, RX N'ihe dị nro (0-100%), nwere ike ịda mbà Mkpuchi Mpekere, Nchedo Nsochi Nchedo anya: 6KV TUV CB CE UL FCC akwụkwọ FD-108U na- emetụta Light Light Bay . A na-eji...
FD-108U, Akara akpụrụ, tinye aka na ìhè Bay Bay . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga n'ihu Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110...
FD-108U, Akara akpụrụ, tinye aka na ìhè Bay Bay . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C, gafee...
FD-160U, Akara akpụrụ, tinye aka na ìhè Bay Bay . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C, gafee...
FD-240U, Akara akpụrụ akpụ, tinye aka na ìhè Bay Bay . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C,...
FD-200U, Akara akara a na-etinye, na-etinye aka na Elu Bay LED Ìhè . Nke a na-adabara maka ikuku dị elu nke na-eme ka ọkụ ọkụ na-aga Roung. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 90-305Vac , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo...
China Ọkwa ụgbọ mmiri dị elu Bay Light Ngwa
Ọkwọ ụgbọ ala dị ugbu a , UL na-agbanwe agbanwe , N'iji usoro ịmepụta ụwa na akwụkwọ dị iche iche gụnyere EC, UL na FCC, a na-ere ngwaahịa ọkụ anyị n'ahịa ụlọ ma na-ebupụ ya na ahịa dị iche iche nke mba ụwa gụnyere US, UK, France, Germany, Australia, Africa , Korea etc. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke ikanam ọkụ ngwọta nke na-agụnye ikanam Linear ọkụ ma ọ bụ System,, LED Lams, LED High bay lights etc. ngwọta.
Onye ọkwọ ụgbọala na-edozi UL Dimmable Transformer Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu ugbu a Saucer Ụdị Ọkụ Diri esi gbakwunye ndị ibe ya Ọkwọ ụgbọala na-edozi Ọkwọ ụgbọala na-eduzi